Tsika uye Tsika dzeUnited States: Nyika Yakasarudzika | Kufamba Nhau
Luis Martinez | 16/06/2021 08:50 | tsika nemagariro, United States
Kutaura nezvetsika nemagariro eUnited States hazvisi nyore. Iyo inzvimbo hombe mune tsika dzakasiyana dzinogara pamwe uye yega yega ine yayo tsika dzako. Semuenzaniso, kune yakasimba chinese nharaunda iyo inochengetedza mhemberero dzayo nemhemberero. Tinogona kukuudza zvakafanana nezvezvizvarwa zveItaly, Ireland, Latin America kana Africa.
Zvisinei, ichokwadi zvakare kuti, mukati memakore anopfuura mazana maviri ayo nyika ine, nhevedzano ye Zvakajairika tsika dzeAmerica netsika kuvagari vayo vose. Kana iwe uchida kuvaziva, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Tsika dzeAmerica uye Tsika: Kisimusi kuKutenda
1.1.1 Kudya kwekutenda
1.2 Zuva Resununguko
1.3 Zuva raSt
1.5 Halloween, imwe yetsika nemagariro akapararira muUnited States pasi rose
1.6 Chitubu Break nedzimwe tsika dzeAmerica dzakabatana nenyika yemudzidzi
1.7 Zuva reChirangaridzo
1.8 Zuva raApril Benzi
Tsika dzeAmerica uye Tsika: Kisimusi kuKutenda
Kunyangwe isu tichigona kutevedzera marongero enhoroondo, tinoona zvichinakidza kukuudza nezvetsika nemagariro eUnited States, kutanga ne chinonyanya kukosha. Ndokunge, zvisinei nekuraira kwavo nemadheti mugore. Neichi chikonzero, isu tichatanga neiyo ingangodaro inonyanya kukosha, kunyangwe ikaitwa munaNovember.
Chokwadi, pamwe iyo quintessential yekuNorth America tsika ndeye Kutenda. Uye isu tinoti North America nekuti inopembererwawo mukati Canada, nyika ine tsika kare tinotsaurira posvo pane yedu blog.
Zvinoitika China wechina waNovember uye pakutanga raive zuva rakatsaurirwa kutenda goho rapfuura regore. Tsika dzese dzakave nemhemberero dzakafanana. Mune mazhinji vanoramba vachirangarirwa, asi pasina nzira zvine simba senge muAmerica.
Munyika dzekuchamhembe kweAmerica, mutambo uyu wakatanga muna 1623 mu Plymouth, nyika yazvino yeMassachusetts, apo vagari vemo nevatorwa vakagovana chikafu chavo. Zvisinei, chirangaridzo chacho hachina kupembererwa zvakare kusvika muna 1660. Zvisinei, ruzivo urwu rwatichangobva kupa runogona kunge rwuchipesana, sezvo vamwe vanyori venhoroondo vakaisa mhemberero yekutanga yekutenda mu St. Augustine, Florida, uye muna 1565.
Chero zvazvingaitika, zuva iri rekuonga rakagadzwa setsika yakakoshesa muUnited States. Munyika yose ivo vanopembererwa kufora, asi zvinoitika zvechiitiko zvinoitika mumabiko emhuri manheru iwayo.
Mumusha wega wega munyika, mhuri dzinoungana kuzodya. Usati watanga kudya, munamato unonzi wekutenda maropafadzo akagamuchirwa gore iro uyezve chikafu chinonaka chinoravira.
Nzvimbo yega yega yenyika ine zvayakanakira, asi chikuru chinhu cheiyo menyu ndeye iyo turkey. Zvikuru zvekuti, mune inosetsa toni, Yekutenda inonziwo Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Turkey Day kana "turkey zuva."
Kazhinji, inogadzirwa yakagochwa uye inoperekedzwa nemuto webluebheri. Sekunaka kwave nembatatisi yakakwizwa nezviya zvinonzi green bhinzi casserole, dhishi remuriwo rakagadzirwa neonikisi yakakangwa, bhinzi yegirini uye kirimu howa.
Pakupedzisira, Kudya kwekutenda kwakagadzirwa netapie mbatatisi, bheribheri kana manhanga, kana maapuro anobata.
Zvimwe zvemazuva ano ndezvokuwedzera-kuwedzerwa kuKutenda Zuva. Tinotaura newe nezve Black Friday, inoitika nekukurumidza mumashure. Chishanu Chishanu ndiyo nguva yavanotanga Kisimusi kutenga uye maketeni makuru ekutengesa anoshandisa zvinonakidza zvinopihwa kune zvigadzirwa zvavo. Sezvaunoziva, nguva pfupi yadarika zuva iri rasvikawo munyika medu.
Iyo ndeimwe yetsika uye tsika dzeUnited States iyo yakadzika midzi pakati pevagari venyika. Seizvo zita rayo rinoratidzira, rinoyeuka iyo United States kuzivisa kusununguka iyo yakaitwa pachena musi waJuly 4, 1776.
Zuva iro, gumi nematatu eBritish makoloni akanyatsozvipatsanura kubva kuhutongi hweChirungu, kunyange hazvo vaifanira kusangana nehondo kuti vabudirire. Chero zvazvingaitika, Zuva reRusununguko ndeimwe yemhemberero dzekare munyika, sezvo yakanzi izororo renyika muna 1870
Maparagi, mitambo ye baseball, mafayawekisi, uye zvimwe zviitiko zvekurangarira zvinoitwa muUnited States yese mukati kusimudzirwa kwekuda nyika yevagari.
Zuva raSatrick Patrick
Pakutanga, isu takataura newe nezve amalgam etsika dzakaumba United States. Pakati pavo, imwe yeakanyanya kuwanda ndeye irish. Paive nevagari vazhinji vechitsuwa cheBritish vakatamira kunyika yeNorth America. Parizvino, zvinofungidzirwa kuti vanopfuura mamirioni makumi matatu emamiriyoni evaIrish mavambo vanoumba chikamu cheichi.
Zvese izvi zvakakosha nekuti tiri kuzotaura newe nezve mutambo unotangira murudzi rweEurope: iyo Zuva raSatrick Patrick. Nekudaro, yatove inofungidzirwa netsika yeUnited States seimwe yetsika dzayo dzakakosha uye dzakakurumbira.
Muchokwadi, paradhiso yekutanga yekurangarira musande muAmerica yakaitwa 17 yaKurume ya1762 muNew York. Ndokunge, United States isati yave nyika yakazvimiririra. Parizvino, gore rega uye pazuva iro, nyika yakavezwa girini, iro rakajairika ruvara rweIreland uye kune mafaro kuburikidza nemaguta nemaguta eUnited States. Kwete kushaikwa mumhemberero Doro, chinwiwa sezvakangoitika muNorth America senyika yeEurope.
Mazororo eKisimusi anopembererwa muWestern world. Uye United States yaisazove inosarudzika. Muchokwadi, kune veAmerica iri zororo rakakosha kwazvo. Kwavari, zvinosanganisira zviitiko zvakajairika kune dzimwe nyika senge Kisimusi Evha chisvusvuro uye Kisimusi masikati, asi zvakare nedzimwe tsika uye zvechivanhu tsika.
Pakati pekupedzisira, kushongedza kunodakadza kwedzimba dzavo nemwenje, tsika yekusiya masokisi ku Santa Claus kuti iye asiye zvipo zvake kana tsika yemistletoe o Mistletoe. Ino mune iyo, pese panopinda vaviri pasi payo, vanofanirwa kutsvoda uye kunhonga muchero.
Halloween, imwe yetsika nemagariro akapararira muUnited States pasi rose
Halloween haisi yezororo reAmerica. Vanyori vezvakaitika kare vanoisa mavambo ayo mu Samhain wevaCelt. Iyi tsika yechihedheni yairangarira kupera kwekukohwa mutsika yekare iyi uye yakaitika musi waGumiguru 31.
Izvo hazvina chekuita nekukohwewa kwemichero paHalloween nhasi, kunyangwe ichiramba ichipembererwa pazuva rimwe chete. Icho chokwadi ndechekuti, kwemazana emakore, mudunhu reNorth America ivo vanoveza maungu izvo zvinovhenekerwa nechinhu chinotyisa, zvidiki zvinopfeka sevaroyi kana vamwe vatambi vasinganzwisisike uye dzimba dzakashongedzwa.
Asi pamwe tsika yakajairika ndeye iyo ine hunyengeri kana kurapwa, nevana vachishanyira dzimba dziri munharaunda yavo kuti vakumbire zviwitsi. Mukana wekusavagamuchira, vanotamba joko diki kune avo vanogara. Sezvineiwo, ndisingazive chaizvo kuti nei, kupemberera kweEuropean mavambo ayo akange ave kutokanganikwa muOld Continent, akapona muAmerica uye izvozvi adzokera kunyika dzedu nekubudirira kukuru.
Chitubu Break nedzimwe tsika dzeAmerica dzakabatana nenyika yemudzidzi
A Florida Beach Panguva YeChirimo Kuputsa
Mazhinji etsika dzakakurumbira uye tsika muUnited States zvine chekuita nenyika yemudzidzi. Kunyanya, isu tichataura nezvevaviri vavo.
Yokutanga ndeiyi kupera kwematsutso o kuputika kwematsutso. Kwevhiki, mumwaka iwoyo, mayunivhesiti akavharwa achisiya vadzidzi vakasununguka, avo vanowanzoenda kunzvimbo dzinopisa kwazvo dzenyika kunogara mamwe mazuva anopenga. Zvirokwazvo waona akawanda mafirimu anobata nenyaya iyi, asi isu tichakuudza izvo, semuenzaniso, iwo mahombekombe eFlorida ivo vakazadzwa nevechidiki vanofarira kunakidzwa nemabiko.
Kune iro chikamu, tsika yechipiri ndiyo Homecoming. Kusiyana neyekutanga, ndizvo unogamuchirwa kuyunivhesiti yevadzidzi vatsva. Mukutangisisa kweiyi kosi, kwete chete nzvimbo dzekudzidzisa dzakashongedzwa, asiwo mapati kuburikidza nemaguta uye mamwe marudzi ezviitiko anoitwa.
Teresi kune vakadonha
Iyi tsika ine toni yakadzama yatichazokutsanangurira. Iyo Memorial Day o Zuva reChirangaridzo Izvo zvinoitika neMuvhuro wekupedzisira muna Chivabvu uye unopa ruremekedzo kumauto eAmerica akarasikirwa neupenyu hwavo mune imwe yehondo dzakapindira nyika iyi.
Pakutanga, zvakaisirwa kurangarira mauto akaurayiwa panguva ye Hondo Yenyika kana Hondo yeVanhu veAmerica. Asi gare gare, mutero wakapihwa kune vese maNorth America vakawira muhondo yakaita sehondo.
Zuva raApril Benzi
NCAA Kurume Kupenga
Chekupedzisira, isu tichakuudza nezve zuva rino ratingaenzanise needu Mutambo weVatsvene Vasina mhosva. Kwayakatangira yakadzokera kuchishuwo chevagari vekare kuseka maChirungu kuti vazviratidze sevakangwara kupfuura ivo.
Naizvozvo, kana iwe uri muUnited States musi waApril 1, chenjera, hausi kuzova nyajambwa wejee. Zvinonzwisisika, nyika yeNorth America haisi yega inoripemberera. Izvo zvinoitikawo muItaly, France, Germany, Portugal kana Brazil. Inotowanikwa mutsika yechitsuwa chedu che Minorca.
Mukupedzisa, isu takakuudza iwe nezve chikuru tsika uye tsika dzeUnited States. Asi nyika yeNorth America ine vamwe vakawanda. Semuenzaniso, iye Zuva reMutungamiri, inoitika neMuvhuro wechitatu munaKukadzi uye kurangarira kuberekwa kwaGeorge Washington. Kana, mumitambo, iyo NCAA Kurume Kupenga, iyo inounza pamwechete makuru epamayunivhesiti zvikwata zvebhasikiti muchikamu chekupedzisira chinoteverwa nemamirioni avanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » United States » Tsika uye Tsika dzeUnited States
Yukatán chaiwo koshitomu